Weriya Aljazeera u shaqeeya oo Jarmalka lagu xiray - BBC Somali
Weriya Aljazeera u shaqeeya oo Jarmalka lagu xiray
21 Juunyo 2015
Image caption Masar waxay horey u xirtay weriyayaal u shaqeeya Aljazeera
Telefishinka Aljazeera ayaa dalbanaya in sidegdeg ah loo siidaayo mid ka mid ah weriyayaasheeda oo lagu magacaabo Axmed Mansuur, kaas oo lagu xiray dalka Jarmalka kaddib markii masar ay sidaasi codsatay.
Kusimaha agaasimaha guud ee TV-ga Aljazeera Mustafa The acting director general of Al Jazeera , Mostefa Souag, ayaa sheegay in dalalka kale ee caalamka inaysan ahayn in ay noqdaan wado loosoo maro dhibaateynta warbaahinta.
Qoraal uu Facebook ku qoray Mr Mansuur waxa uu ku sheegay in maamulka Jarmalka ay tusiyeen qoraal muujinaya inuusan ahayn qof ay booliska Interpol ay doondoonayaan.
Sanadkii la soo dhaafay maxkamad ku taalla Qaahira ayaa Axmed Mansuur ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah, asigoo ka maqan maxkamadda. Waxaa loo haystaa eedo la xiriira jirdil.
Al Jazeera waxa ay ku dhawaaqday in eedahaasi yihiin kuwa been abuur ah oo aysan waxba kajirin.
Weriyaha waxa uu haystaa dhalashada dalka Masar iyo tan Britain.